Tsy fandriampahalemana ao Toamasina : jiolahy telo maty voatifitra, efatra hafa azo sambo-belona | NewsMada
Tsy fandriampahalemana ao Toamasina : jiolahy telo maty voatifitra, efatra hafa azo sambo-belona
Matin’ny balan’ny Fip Toamasina ny telo lahy voalaza fa jiolahy raindahiny ao Toamasina ao. Nisy efatra hafa ihany koa naratra mafy vokatry ny tifitra ihany. Vehivavy ny iray amin’ireo olon-dratsy, anisan’ny tratra ihany koa…
Tambajotrana jiolahy mpanao fanafihana mitam-piadiana sy mpamaky trano ary asa fampihorohoroana any an-dRenivohitr’ i Toamasina indray no ravan’ny polisin’ny Fip ny alin’ny alakamisy hifoha ny zoma tokony ho tamin’ny 1 ora sy 30 minitra maraina, tao amin’ny fokontany Depot. Tambajotran-jiolahy miandahy miambavy ireto ravan’ny polisy ireto.
Nirefodrefotra nandritra ny adim-pamantaran’ ora iray be izao ny poa-basy tamin’ ity fokontany ity. Namaly tifitra rahateo ireo andian-jiolahy miisa fito mianadahy ireto.
Maty voatifitra ny telo mirahalahy ary naratra mafy noho ny tifitra kosa ny telo hafa. Vehivavy iray nilavo lefona avy hatrany izay anisan’ny voasambo-beloana ihany koa. Mbola tsaboina ao amin’ny Hopitalibe ireo telo naratra, raha mbola tsy nisy fianakaviana naka kosa ny telo maty voatifitra ao amin’ny tranom-patin’ny Hopitalibe.
Ny fanadihadiana no nahalalana fa mpiray tanindrazana avy amin ‘iny faritra atsimon’ny Nosy avokoa ireto fito mianadahy ireto. Jiolahy efa nikoizana hatramin’ ny ela ireo maty voatifitra sy voasambo-belona ireo. Voatifitra i Talisoa, i Manohitsoa ary Andrianantenaina, raha ry Razafisoa Nirina Jeanette 22 taona, Mara 28 taona, Vitasoa 19 taona ary Manaoazy
Mamelo 24 taona kosa no voasambo-belona. Anisan’ireo miafina any amin’ny toerana fivarotana korontamby any Anjoma izy ireo, araka ny loharanom-baovao hatrany.
Tsy vao sambany ny nilazan’ny komandan’ny Fip, ny kaomisera Rafaliarivo Jules, amin’ny fampitandremana ireo mpanao asa ratsy fa tsy hitsitsy manoloana any asa ratsin’ izy ireo ny polisy. Raha tsiahivina, izay fomba fiasany izay no anisan’ny nanaovan’ny sefo fokontany miisa 138 fangatahana ny niverenany eto Toamasina ary hisahana ny Fip hatrany. Ity farany izay efa nafindra toerana tany Fianarantsoa no naverina indray any an-toerana.
Fomba fiasa hentitra ihany kanefa mahomby manoloana ny asan-jiolahy mahery vaika ao Toamasina ao. Faritra anisan’ny mafana amin’ny asan-jiolahy raha mitaha amin’ny Renivohi-paritra hafa. Ahitana kidnapping, fanafihana mitam-piadiana, vonoan’olona, fitsaram-bahoaka, ary pesta any an-toerana.